Saturday,2Dec, 2017 1:40 PM
फलेवास, पर्वत, १६ मंसिर -फलेवास नगरपालिकाका छवटा वडाका किसानका लागि करिब रु. दुई करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत परम्परागत खेती प्रणालीबाट किसानलाई व्यावसायिक बनाउने योजनाका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
चालु आवमा विभिन्न अनुदानमा मात्रै करिब रु. डेढ करोड खर्च गरिने परियोजनाको जोन एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । फलेवास–४ मुडिकुवामा चालु आवका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वसन्तकुमार श्रेष्ठले मकै बीउमा अनुदानदेखि भण्डारणका लागि मेटलविनमा समेत अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।